मान्यजनसंग आशीर्वाद लिएर दशैं मनाउने योजना छ : नवराज रिजाल – Contemporary News Portal From Nepal
मान्यजनसंग आशीर्वाद लिएर दशैं मनाउने योजना छ : नवराज रिजाल
प्रकाशित मिति: १२ आश्विन २०७३, बुधबार ०६:१७
सफल ब्यवसायी र समाजसेवीको रुपमा चिनिएको नाम हो नवराज रिजाल । टाईमलाईन स्कुलका बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नवराज रिजालसंग आशाका किरणका सुदर्शन बजगाईले बिद्यालय र दशैंको बारेमा गरेकी संक्षिप्त कुराकानीको संपादित अंश :
टाईमलाईन स्कुल खोल्ने सोच कताबाट आयो ?
यो ५ वर्ष अगाडि साथीभाईसंग सल्लाह गर्दा यो भेगमा उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था खोल्नुपर्छ भन्ने सल्लाह अनुसार यो स्कुलको स्थापना भएको हो ।
के छ बिशेषता ?
शैक्षिकमात्रै नभएर अतिरिक्त क्रियाकलापमा पछिल्लो ५ प्रतियोगितामा सहभा हुदा ३ प्रतियोगितामा २ प्रतियोगितामा प्रथम र एकमा दोश्रो हुनुले हाम्रो क्षमता र हाम्रो दर्जा देखाएको छ । शैक्षिक, भौतिक र अतिरिक्त क्रियाकलाप सबैमा हामिले आफुलाई अब्बल राखेका छौं ।
के हो तपाईंको संस्थाको छोटो समयमा सफलता प्राप्त गर्नुको राज ?
म अभिभावक को सहयोग र मायालाई सफलताको राज ठान्दछु ।स्कुल खोल्छु भनेर भवन बनाउँदा बनाउँदै गर्दा बिस्वास गरेर नानीबाबुलाई हाम्रो बिस्वासमा छाड्नु भएकाले हामी अभिभावकलाई सफलताको श्रोत ठान्दछौं ।
अबको ५ वर्षमा टाईमलाईनलाई कहाँ देख्नु भएको छ ?
अबको ५ वर्षमा प्लस टु सहितको ठूलो शैक्षिक संस्थाको रुपमा देख्न सक्नु हुन्छ ।
के छ दशैंको योजना ?
खासै त्यस्तो छैन । पानी र बर्खायाम भएकाले कतै जाने सोच छैन । मिल्यो भने घुम्न जाने योजना छ ।
तपाईंको समय र अहिलेको दशैंको फरक के पाउनु भएको छ ?
पहिला अरुले दशैं मनाईदिन्थे अहिले आफुले आरुलाई मनाइने गरेकोनै फरक हो । पहिला अरु अभिभावक थिए अहिले आफू अभिभावक छु र पहिला लुगा सिलाउन एक महिना अगाडिडेखी तयारी गर्नुपर्दथियो भने अहिले एक घन्टामा रेडिमेड सपिङ गर्न पाईने भएकाले यस्तै फरक पाएको छु मैले
के छ यो चाडको रमाईलो पक्ष ?
म मांसहारी भएकाले खसी काट्ने र मान्यजनबाट आशिर्वाद लिनेनै रमाईलो पक्ष लाग्छ । मेरो ९७ वर्षको बुबाको हातबाट टीका लगाएर आशिर्वाद लिने बिचार छ योनै शैभाग्य हो जस्तो लाग्छ ।
के बिकृती देख्नु भएको छ पहिला र अहिलेको दशैंमा ?
होहल्ला गर्ने र मापसे सेवन गरेर झैझगडा गर्नेनै हुन अहिलेका बिकृतीहरु ।
म सम्पुर्ण देशवासी र टाईमलाइनलाई मायगर्ने शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थी र अभिभावकलाई बडा दशैं ,दिपावली,छठ र नेपाल सम्बतको एक्मुस्ठ शुभकामना दिन चाहन्छु ।
१२ आश्विन २०७३, बुधबार ०६:१७ मा प्रकाशित